नेप्से प्राविधिक विश्लेषण(मंगलवार, २९ माघ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर नेप्से प्राविधिक विश्लेषण(मंगलवार, २९ माघ २०७५)
on: २८ माघ २०७५, सोमबार १७:४३ मुख्य खबर, लगानी
नेप्से प्राविधिक विश्लेषण(मंगलवार, २९ माघ २०७५)
माघ २८, काठमाडौं (अस) । सोमवार नेप्से परिसूचक १ दशमलव ३४ अंकले बढेको छ । १ हजार १२७ दशमलव ७० विन्दुबाट शुरू भएको कारोबार दिनभरमा शून्य दशमलव १२ प्रतिशत बढेर १ हजार १२८ दशमलव ८६ विन्दुमा पुगेको छ । दिनभरको कारोबारमा परिसूचक उच्च विन्दु १ हजार १३२ दशमलव ६९ विन्दुसम्म पुगेको छ भने न्यून विन्दु १ हजार १२४ दशमलव ४२ विन्दुसम्म झरेको छ । कारोबारमा आएका १० समूहको परिसूचकमा बैंकिङ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको बाहेक बाँकी ८ समूहको परिसूचक बढेकाले समग्र नेप्से बढेको हो ।
सोमवार रू. २० करोड २७ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । आइतवारको तुलनामा कारोबार रकम १३ दशमलव ८१ प्रतिशतले कमी आएको हो । आइतवार रू. २३ करोड ५१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत बढेर २४० दशमलव ४ विन्दुमा पुगेको छ ।
सर्वाधिक कारोबार भएका १० कम्पनीहरू
१६६ कम्पनीको कारोबार
१६६ कम्पनीको शेयर कारोबारमा ७७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ५० कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, ३९ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य ९ दशमलव ८९ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ३११ पुगेको छ । त्यस्तै, वरूण हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमूल्य ३ प्रतिशत घटेर रू. ९७ पुगेको छ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. २३२ मा सर्वाधिक रू. १ करोड ४० लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।